Emmanuel Macron ari munjodzi - Techip RELAY PRESS REVIEW%
Emmanuel Macron ari munjodzi
Muna 2022, Emmanuel Macron haadi kurega nzvimbo yake semutungamiri nyore nyore. Ine chiitiko chinemakore mashanu-chakaitika neyakajeka yeroves, iyo coronavirus uye zviitiko zvichangobva kuitika, Emmanuel Macron achiri kungwara.
Vanotarisana nekumisikidzwa kwehutungamiriri hwe2022 kudivi reMutungamiriri weRepublic, vanogamuchira vanonyanya kunetseka.
Emmanuel Macron: humbowo hunobvira muna 2022?
Nezviitiko zvese izvi, hatingataure kuti Emmanuel Macron anoshuvira kupa chero munhu nzira. Wokupedzisira akaenderera zvakare mukutenderera kwehurumende kwemakore maviri ekupedzisira emakore mashanu emakore. Uye panguva yekutora kwake simba semusoro wenyika, Emmanuel Macron ane ruzivo nezvakakwira.
Pakati pezvakachengeterwa yero uye coronavirus, Mutungamiriri wenyika akaedza kubata idzo mhirizhonga dzakasiyana siyana sezvingabvira, asi haana kugara achibudirira kudzikamisa mapoka. Akatarisana nekumiriri kwake kungangoitika muna 2022, uyo anokurudzirwa naEmmanuel Macron anonetsekana ... Kunyanya kana Anne Hidalgo afunga kumhanya futi ...
Anne Hidalgo: mudenhi anotyisa uye anotyisa?
Nemisarudzo yake mbiri meya weParis, Anne Hidalgo munhu akasimba wezvematongerwo enyika. Iye iye kunze kwekukunda Rachida Dati, wepfuti tete vezvematongerwo enyika. "VaMacron vanokurudzirwa vari kuona Hidalgo, ndizvozvo," anotsanangura kudaro mutevedzeri mazhinji kuna Le Parisien. "Ndiye wezvematongerwo enyika akasimba, akakunda sarudzo mbiri muParis, anoziva mushandirapamwe, venhau ...".
Makurukota akati wandei uye maparamende vanobvumirana pane imwecheteyo pfungwa: kuti usarerutse Anne Hidalgo. Uye kunyangwe dai Meya weParis aripo akataura musi waChikunguru 23 kuti aisada kumirira sarudzo dzemutungamiri wenyika dza2022, nhengo dzeLa République En Marche dzinoramba dzichimhan'arira Anne Hidalgo.
Ichi chinyorwa chakatanga kuoneka pa: https://onvoitout.com/emmanuel-macron-en-danger-ses-proches-plus-inquiets-que-jamais/
Bir Kadın: Fatmagül Berktay - Vhidhiyo
EYINDI KOFFY OLOMIDE ANOGONESA ZVINODZIDZIRA YA INNOS'B KUSVIRA PASI IPUPA GADZIRA ZVESE ZVESE ATHANDI - Vhidhiyo